United Airlines inowedzera ndege nyowani dzeCroatia, Greece neIceland sezvo nyika dzichivhurazve vafambi vakabaiwa jekiseni
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » United Airlines inowedzera ndege nyowani dzeCroatia, Greece neIceland sezvo nyika dzichivhurazve vafambi vakabaiwa jekiseni
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Croatia Kuputsa Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Iceland Breaking News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
United iri kupa vafambi dzimwe nzira dzekufamba zhizha nekubhururuka vakananga kune nyika dziri kutanga kuvhurwa kune vaccinic vashanyi
Kutanga muna Chikunguru, United ichapa ndege dzakananga kubva kuNewark Liberty International Airport kuenda kuDubrovnik, Croatia
Kutanga muna Chikunguru, United ichapa ndege dzakananga kubva kuWashington Dulles International Airport kuenda kuAthens, Greece
Kutanga muna Chikunguru, United ichapa ndege dzakananga kubva kuChicago O'Hare International Airport kuenda kuReykjavik, Iceland
United Airlines iri kuwedzera nendege nhatu nyowani kunetiweki dzenyika dzese, ichipa vafambi dzimwe nzira dzekufamba zhizha nekubhururuka vakananga kunyika dziri kutanga kuvhurwa kune vaccinic vaenzi. Kutanga muna Chikunguru, United Airlines ichapa ndege dzakananga kubva kuNewark Liberty International Airport kuenda kuDubrovnik, Croatia, kubva kuWashington Dulles International Airport kuenda kuAthens, Greece uye kubva kuChicago O'Hare International Airport kuenda kuReykjavik, Iceland, zvese zvichitenderwa nehurumende.
United's Travel-Ready Center inogonesa vatengi kurodha zvinyorwa zvavo zveECOVID-19 uye zvekudzivirira, uye voita kuti vazivikanwe pamberi pekupinda kuitira kuti vatengi vakwanise kuwana yavo yekukwira vasati vaenda kunhandare yendege. United ndiyo chete ndege yendege inoita izvi zvisina mushe nhandare yendege yendege.
Kuwedzeredzwa kwenzira idzi nyowani kunoratidza kuwedzera kwechido pakati pevatengi veUnited: mumwedzi wapfuura, kutsvaga kuUnited.com kwendege dzinoenda kuCroatia, Greece neIceland dzakakwira 61%. Uye vatengi vanogona kutora kufamba kutanga nhasi kuUnited.com uye paUnited mobile app.
"Sezvo nyika pasi rose dzinotanga nzira yekuvhurazve, vafambi vezororo vane shungu dzekutora nzira refu yakamirirwa kuenda kunzvimbo nyowani dzenyika," akadaro Patrick Quayle, mutevedzeri wemutungamiriri wepasi rese network nekubatana. “Iyi migwagwa mitsva mitatu inovhura runako rwekunze rwekunze rwevaenzi vedu. Ndiwo zvakare muenzaniso uchangoburwa wekuti United iri kuramba yakashinga papi pakuvaka netiweki yedu. "
United inoronga kuwedzera iyo yega isingamire sevhisi pakati peUS neCroatia muna Chikunguru 8, nebasa kuDubrovnik kuCroatia Dalmatian Coast. Ndege ichaita nendege nhatu dzevhiki nevhiki pakati peNewark neDubrovnik kusvika Gumiguru 3 paBoing 767-300ER ine zvigaro makumi matatu zvebhizinesi reUnited Polaris. Ndege dzichashanda Muvhuro, China, neMugovera kubva kuNewark uye neChipiri, Chishanu, uye Svondo kubva kuDubrovnik uye ichapihwa nguva yekubatanidza muNewark kumaguta anopfuura makumi matanhatu nemashanu muNorth America.